Nhengo dzeParamende Dzozeya Gwaro reBumbiro Idzva
Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva yeCOPAC, yapa magwaro ebumbiro idzva kunhengo dzose dzematare maviri eparamende and House of Assembly ne Senate. Komiti iyi inoda kuti nhengo idzi dzinzwisise zviri mubumbiro iri risati raendeswa kumusangano wechipiri wekuona kuti zviri mugwaro iri ndizvo here zvakataurwa neveruzhinji.
Mumwe wemasachigaro ekomiti iyi, VaDouglas Mwonzora veMDC inotungamirirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, ndivo vapa magwaro aya kunhengo dzeparamende.
Vamwe vavo vanoti VaPaul Mangwana veZanu PF naVaEdward Mkhosi veMDC inotungamirirwa negurukota rezvemaindasitiri, VaWelshman Ncube, vange vasipo.
VaMwonzora vatiwo chinangwa chavo ndechekuti musangano we second all stakeholders uitwe muna Nyamavhuvhu.
Asi vati zuva rekuti musangano uyu uchaitwa riini richatarwa pamusangano uchaitwa svondo rinouya pakati pehurumende, COPAC nevemasangano ari kubatsira nemari pakunyorwa kwebumbiro idzva.
Vati kunyange hazvo paine vamwe vatotanga kushoropodza gwaro iri, gwaro iri richatambirwa pamusangano uchaitwa. Asi vati musangano uyu unogona kushandura bumbiro iri zvishomanana sezvo vakaita basa ravo nemazvo.
VaMwonzora vati veruzhinji havafaniri kuteerera zvinotaurwa nevanhu vakaita semumiriri weTsholotsho North, VaJonathan Moyo, chipangamazano che Zanu PF mukunyorwa kwebumbiro idzva, VaGodwills Masimirembwa, pamwe nasachigaro weNational Constitutional Assembly, VaLovemore Madhuku.
VaMwonzora vati vanhu vanofanira kuverenga gwaro iri pachavo vega voisa pfungwa dzavo vega.
VaMasimirembwa naVaMoyo vari kushora gwaro reCOPAC vachiti harina kuiisa zvakabva muvanhu. Ukuwo Zanu PF iri kuita musangano neChishanu wekuzeya gwaro iri sezvo mubato iri musina kuwirirana pagwaro iri.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo rinoda kupa hutungamiri mukana wekuti hunzwisise zviri mubumbiro vasati vatora matanho.
Sangano ravo reNational Constitutional Assembly rinoti riri kukurudzira veruzhinji kuti vasatambire bumbiro iri richiti zvakabva muvanhu hazvina kukosheswa. Sangano iri rakarurudzira veruzhinji kuramba bumbiro idzva muna Kukadzi 2000.
Kana gwaro reCOPAC rikatambirwa nemusangano uchaitwa, richanozeiwa kuparamende pasati paitwa referendamu.
Gwaro iri rikatambirwa pareferendamu, rinenge roendeswa zvakare kuparamende kuti ritambirwe sebumbiro renyika. Asi rikarambwa nevanhu pareferendamu, izvi zvichatemesa hurumende yemubatanidzwa musoro nekuti chibvumirano cheGlobal Political Agreement chinosungira nyika kuti iite sarudzo pasi pebumbiro idzva.